Textricator: iri nyore data rinobvisa mafaera ePDF | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | GNU/Linux, Zvirongwa, Linux software
Textricator chishandiso chinonakidza kuti iwe uzive. Iyo yakavhurwa sosi uye inoshandiswa kuburitsa data rakaomarara kubva kumagwaro ePDF, pasina kudiwa kwekuronga ruzivo. Kana iwe uchida kuziva rumwe ruzivo nezve ichi chishandiso, unogona kuwana iyo zviri pamutemo webhusaiti yepurojekiti. Kubva ipapo iwe unowana ruzivo uye zvakare kuwana zvinongedzo kune chishandiso kodhi paGithub, pamwe nezvayo zvinyorwa.
Textricator inogona kutora mavara kubva ku PDF mafaera uye kugadzira data rakarongeka (CSV kana JSON). Chinhu chinoshanda kwazvo kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitaita neakawanda maPDF eiyo fomati kana iyo hombe PDF, uye inogona kushanda pazvinyorwa zveOCR. Chishandiso chinotaridzika zvakanaka kwazvo, uye chakaunzwa ku2018 Code yeAmerica Summit, uye yakagadziriswa neMatanho eRuramisiro nechinangwa chekubatsira vese avo vanoda kuburitsa iyi mhando yedata vasina programming ruzivo.
Panzvimbo pekuda zvirongwa zveimwe nzira, Textricator inobvumira mushandisi kutsanangura chimiro chegwaro achishandisa yaml faira. Uye saka unogona kuburitsa data kubva paPDF mafaera mune chero marongero, kusanganisira matafura, uye nekugadzira yakaoma mishumo kubva zvishandiso senge Crystal Reports. Izvo zviri nyore, iwe unoraira izvo zvaunoda kutora uye Textricator inozviita zvoga zvoga ...
Vagadziri vayo Joe Hale naStephen Byrne ivo vapedza makore maviri apfuura vachishanda pachirongwa kuti vakwanise kutora makumi ezviuru emapeji e data kubva kune chero mafomati ePDF. Uye inogona kushandiswa kubva pamutsetse wekuraira, asi kune zvakare GUI inowanikwa zvirinyore. Saka isu tinokukurudzira iwe kubva kuLxA kuti ushandise iyi Tabula imwe nzira (kunyangwe iri shoma mumabasa kutora data kupfuura iyo inoshanduka Textricator) uye imwe software yakafanana nayo yekubvisa dhata.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Textricator: iri nyore data rinotora mafaera ePDF
Iyo yekupedzisira vhezheni yePipplware 6.1 yeRaspberry Pi ikozvino yagadzirira